आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल जेठ १८ गते। शुक्रबार। - KalaiyaLive.Com.Np
आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल जेठ १८ गते। शुक्रबार।
By कलैयालाईभ	 On Jun 1, 2018 53
इश्वी सन् २०१८ जुन १ तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। उत्तरायण। ग्रीष्म ऋतु। नेपाल संवत् ११३८ अनलागा। अधिक ज्येष्ठ कृष्णपक्ष। तिथि– तृतीया, २४:०१ बजेउप्रान्त चतुर्थी। नक्षत्र– पूर्वाषाढा, ३१:३४ बजेउप्रान्त पूर्वाषाढा। योग– शुभ, १८:१८ बजेउप्रान्त शुक्ल। करण– वणिज, ११:०३ बजेदेखि भद्रा, २४:०१ बजेउप्रान्त वव। आनन्दादिमा प्रवर्द्धमान योग। चन्द्रराशि– धनु। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:१० बजे, सूर्यास्त– १८:५४ बजे र दिनमान ३४ घडी १८ पला।
काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०५:११ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०६:५३ बजे
सांझ चलचित्र-थिएटर वा आफ्नो जोडीसित खानाले तपाईंलाई तनाउमुक्त र सुन्दर मुडमा राख्नेछ। नयाँ अनुबंधहरू आकर्षक लाग्न सक्छन्, तर चाहेको लाभ दिन सक्दैनन् – पैसा लगानीको विषयमा हतार गरेर निर्णय नलिनुहोस्। परिवारमा स्वास्थ्यको समस्या भएका कारणले पहिले बनाएका यात्रा कार्यक्रमहरू सर्न सक्छन्। तपाईंले प्रेममा हरेक दिन पर्ने आफ्नो प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईंको जोडीको सामना गर्न कठिन हुनेछ। आज यात्राको लागि धेरै राम्रो दिन छैन। तपाईंलाई र तपाईंको जोडीलाई साँच्चै नै आफ्नो वैवाहिक जीवनको लागि केही ठाउँ आवश्यक छ।
आफ्नो ऊर्जा संकटमा परेका कसैको मद्दत गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस – अरूको लागि कुनै प्रयोगमा आएन भने यो नश्वर शरीरको प्रयोजन छैन। लामो अवधिको दृष्टिले लगानी गरिनु आवश्यक छ। छोराछोरीले स्कूलका परियोजनाहरू पूरा गर्न तपाईंको मद्दत माग्न सक्छन्। रोमान्टिक चालले फाइदा हुनेछैन। आफ्नो काममा लाग्नुहोस् र आज आफ्नो कामको लागि मद्दत गर्न अरूलाई नभन्नुहोस्। सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ। तपाईं र आफ्नो साथीबीच आज फरक सोच हुनाले तर्क हुन सक्छ।
आफ्नी पत्नीसँग पारिवारिक समस्या साझेदारी गर्नुहोस्। मायालु र एकअर्काको पोषण गर्ने दम्पतीको रूपमा आफूलाई पुन स्थापित गर्न र पुन: पत्ता लगाउन एकअर्काप्रति केही समय बिताउनुहोस्। तपाईंका छोराछोरीले पनि घरमा सुख र शान्ति सद्भावको तरङ्ग महसुस गर्न सकुन्। यसले तपाईंहरू दुवैलाई आफ्नो बातचीत ऐच्छिक रूपमा र स्वतन्त्रतासँग गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। अस्थायी ऋणका लागि तपाईंसँग भेट गर्नेहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। समग्र रूपमा लाभदायी दिन हो, तर तपाईंलाई भरोसा लाग्ने कसैले तपाईंलाई गिराउन खोज्नेछ। आफ्नो रोमान्टिक दृश्य प्रसारित हुन नदिनुहोस्। विगतमा गरेका कार्यले आज परिणाम र पुरस्कार पाइन्छ। कसैको लागि अप्रत्याशित यात्रा व्यस्त र तनाउपूर्ण प्रमाणित हुनेछ। कामको दबाबले लामो समयदेखि तपाईंको वैवाहिक जीवनमा व्यवधान दिंदै थियो। तर, आज सबै शिकायतहरू समाप्त हुनेछन्।
तनाउबाट छुटकारा प्राप्त केही शान्त संगीत सुन्नुहोस्। ब्याङ्कका कामहरूमा धेरै ध्यान दिनु आवश्यक छ। परिवारका सदस्यहरूले धेरै मांग गर्नेछन्। आफ्नो प्रेमीको अनावश्यक मागलाई ध्यान नदिनुहोस्। तपाईंले नयाँ व्यापार साझेदारीको विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने – त्यसपछि तपाईंले कुनै पनि प्रतिबद्धता गर्नु अघि हातमा सबै तथ्य प्राप्त गर्नु आवश्यक हुनेछ। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। रिसमा तपाईं कहिलेकाहीं सबै कुरामा शङ्का गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, जो गलत छ र तपाईंलाई थाहा पनि छ। तर आज तपाईंले आफ्नो वैवाहिक बन्धनमा शङ्का गर्न सक्नु हुन्छ।
कार्यस्थलमा वरिष्ठबाट दबाव र घरमा कलहले केही तनाउ ल्याउन सक्छ – जसले तपाईंका कामको एकाग्रतामा बाधा पुर्याउन सक्छ। महत्वपूर्ण मान्छेहरू विशेष वर्गका मान्छेलाई केहि धन प्रदान गर्न तयार हुनेछन्। नातिनातिनाहरू खुशी गराउने राम्रा स्रोत हुनेछन्। आत्मीय प्रेमको एक्स्टसी आज महसुस हुनेछ। यसको लागि केही समय लिनुहोस्। आज गरेको लगानी आकर्षक हुनेछ तर तपाईंले साझेदारहरूबाट केही विरोध हुन सक्छ। आफ्नो जीवनमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने कुरामा हतार निर्णय नगर्नुहोस्। तपाईंको वैवाहिक जीवनको कुरा आउँदा सबै साँच्चै शानदार देखिन्छन्।
विशेष गरेर हृदयरोगीहरूले कफी नलिनुहोस्। तपाईंले बचत हुने लगानीमा लगानी गर्नुभयो भने राम्रो पैसा कमाउनु हुनेछ। भावनात्मक आश्वासन खोज्नेहरूको सहायता गर्न आफुभन्दा ठूला मान्छे आउने छन्। रोमान्स-सैर र पार्टीहरू रोमाञ्चक हुन्छन् तर धेरै गलाउने हुन सक्छन्। अरूले तपाईंको धेरै समय माग गर्न सक्छन् – तिनीहरूलाई तपाईंले कुनै प्रतिबद्धता दिनुभन्दा अघि आफ्नो काम प्रभावित हुँदैन र तिनीहरूले तपाईंको दया र उदारताको फाइदा उठाउन खोज्दै छैनन् भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। कसै कसैको लागि अप्रत्याशित यात्रा व्यस्त र तनाउपूर्ण हुनेछ। केही स्थायी प्रेम क्षणहरूले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा सुन्दर परिवर्तन गर्नेछन्।
आनन्दले भरिएको राम्रो दिन। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। यो सफलता र आनन्द ल्याउने उत्तम समय हो – तपाईंको प्रयास र तपाईंका परिवारका सदस्यहरूद्वारा प्रदान गरिएको सहायताको लागि धन्यवाद। तपाईंले आफ्नो उत्तम व्यवहारमा हुन आवश्यक छ – किनभने आज आफ्नो प्रेमीलाई नराम्रो लाग्न धेरै केही हुनु पर्दैन। तपाईंले सही मानिसहरूलाई आफ्नो कौशल र प्रतिभा देखाउनु भयो भने चाँडै नै नयाँ र राम्रो सार्वजनिक छवि बनाउनु हुनेछ। आध्यात्मिक गुरू वा बुजुर्गले मार्गदर्शन गर्नेछन्। तपाईंको मुड नराम्रो भएकोले आफ्नो जोडीलाई नराम्रो लाग्न सक्छ।
हावामा महल बनाउनको लागि आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस्। बरु अर्थपूर्ण कुरा गर्न आफ्नो ऊर्जा बचाउनुहोस्। खर्चमा वृद्धि हुन्छ तर आयमा वृद्धि हुनाले तपाईंलाई तिर्न सजिलो पर्नेछ। आफन्तहरूको सहयोग प्रदान गर्नुहोस् र आफ्नो मन गह्रुँगो हुने चिन्ता हटाउनुहोस्। अनपेक्षित रोमान्टिक झुकाव हुनेछ। अचानक अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुनाले वा धनको वर्षा हुनाले व्यवसायीहरूको लागि राम्रो दिन हो। आज यात्राको लागि धेरै राम्रो दिन छैन। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई आज अचम्मको समाचार प्राप्त हुन सक्छ।
डरले तपाईंको आनन्द बिगार्न् सक्छ। तपाईंले यसलाई आफ्नै विचार र कल्पनाको उत्पादन हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ। यसले स्वेच्छाको हत्या गर्नेछ – बाँच्नुको आनन्दलाई मार्दछ र तपाईंको दक्षतामा बाधा दिनेछ – यसै कारण तपाईंलाई यसले कायर बनाउनु अघि यसको बीउ नै मारिदिनुहोस्। ठूलो समूहमा आफूलाई संलग्न गराएमा अत्यधिक मनोरंजक हुनेछ – तर तपाईंको खर्च भने धेरै माथि पुग्नेछ। साथी तथा आफन्तहरूलाई आफ्नो राय जबरजस्ती नथोप्नुहोस्, किनकि यो तपाईंको नहुन सक्छ र तपाईंदेखि तिनीहरू अनावश्यक रूपमा रिसाउन सक्छन्। रोमान्सले तपाईंको हृदय र मनमा शासन गर्नेछ। सेवकहरू – सहकर्मी र सह-कामदारहरूको समस्यालाई छोड्नु सकिंदैन। तपाईं निष्कर्षको लागि हतारिनु भयो र अनावश्यक कार्यहरू गर्नुभयो भने यो एउटा दुखपूर्ण दिन हुनेछ। आफ्ना जीवनसाथीसँग बिताएका दिनहरू सामान्य दिनभन्दा राम्रा जस्तो देखिन्छन्।
वाहन चलाउँदा र विशेष गरेर घुमाउरो बाटोमा होसियार हुनुहोस्। कसैको लापरवाहीले तपाईंलाई समस्यामा पार्न सक्छ। किन्न बाहिर जानु अघि तपाईंसँग भएका वस्तुहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंको विशेष गरी प्रेम र ध्यान गर्ने मान्छेसँग व्यावहारिक हुने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंको उदास जीवनले तपाईंको जोडीलाई तनाउ दिन सक्छ। आज तपाईंले आफुले राम्रो काम गरिरहेको आफ्ना परिवारको समर्थनले हो भन्ने कुराको महसुस गर्नु हुनेछ। बाटोमा उत्ताउलो ड्राइभिङ र जोखिम लिनु हुँदैन। आफ्नो जोडीको कठोर व्यवहारले गर्दा तपाईं दिनभरि उदास रहन सक्नु हुनेछ।
तपाईंको लागि धेरै खुशी र आनन्द – किनभने तपाईंले जीवनको पूरा आनन्द उठाउने तय भइसकेको छ। हतारमा निवेश नगर्नुहोस्। यदि निवेश गर्दा तपाईंले सबै सम्भव कोणबाट हेर्नु भएन भने घाटा निश्चित छ। तपाईंको उट्पट्याङ्गको व्यवहार भए तापनि तपाईंको जोडीले सहयोग गरिरहनेछ। अरूको हस्तक्षेपले तनाउ उत्पन्न हुनेछ। तपाईंले आज सबै सुझावहरूलाई आलोचनाको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ, जसले अन्ततः तपाईंको मुड बिगार्नेछ। घरमा संस्कार / हवन / शुभ समारोह गरिनेछ। आज तपाईंको वैवाहिक जीवनको कुरा आफ्नो नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ।